"APIMAKS" LOOGU TALAGALAY BEESKA: TILMAAMAHA ISTICMAALKA - BEEKEEPING
Faa'iidada ee apiary waxay ku xiran tahay caafimaadka beeska. Daryeelka beeyaalku marnaba iloobin tallaabooyinka ka hortagga iyo mararka qaarkood waxay ku buufinayaan apiary iyadoo diyaarin lagu kalsoonaan karo.
Aad u cadeeysid "Apimaks" - miro ammaan ah oo wax ku ool ah, ka takhalusidda cudurrada iyo dulin.
Tilmaanta iyo foomka beedka ee beeska
Balsam "Apimax" waa Cuntada gaarka ah ee quudinta, kaas oo u adeega sidii daaweyn iyo ka hortagga fangas iyo caabuqyada bakteeriyada ee bees iyo Nosema.
Dawadani sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa isla markiiba ka dib marka la ogaado calaamadaha halista ah ee deegaanada shinni. Si looga hortago shilinta, daawada waxaa la isticmaalaa ka dib xilliga malab ee 2 bilood ee sameynta beesha jiilaalka of bees. Foomka beedka loogu talagalay shinni - ka soo saarid cufan oo adag oo ah midab madow ama midab madow leh urka cirbadaha iyo dhadhanka qadhaadhka. Balsam "Apimaks" ma aha oo kaliya daawo waxtar leh, sababtoo ah xayawaankani xitaa waa qabow yahay oo u xanuunsan yahay fitamiin la'aanta: daaweyntu waxay caawisaa in si deg deg ah ay u sii xoogato, hagaajiso difaac ka hor bilawga guga.
Ma taqaanaa? Waxaa jira xaqiiqo dhab ah taariikhda: ciidankii Richard ee Lionheart wuxuu isticmaalaa maraakiibta xoolo beeleed sida hubka ka dhanka ah cadowga.
Xaqiiqadu waxay tahay: fududahay inaad ka digtoonaato daaweynta. Si qoysaska shinnida ah loo yareeyo bukaanka oo aan daciifin, waxaa lagu talinayaa in ay qabtaan dhacdo aad u muhiim ah - ka hortagis.
Farsamooyinka ficilku waa sida soo socota: Apimax waxay leedahay ficillada antiprotozoal, fungicidal iyo bakteeriyada. Guryaha waxaa go'aaminaya kakooban adag oo bioloji ah, iyo waliba qaybaha raadraaca ee qayb ka ah balsa.
Isticmaalka wax lagu daro quudinta ayaa kicinaysa horumarinta shaqaalaha yaryar, waxay kicineysaa ukumo-gelinta iyo sii-deynta caanaha kaluunka kalkaaliyaha, waxay kordhisaa wax-soo-saarka iyo natiijada jiilaalka. Maaddooyinka firfircoon ee malmalka "Apimax" ee beesku waxay kordhiyaan difaacooda, yareeyaan halista cudurka, iyo tilmaamaha isticmaalka waxay ku salaysan yihiin sannado badan oo waayo-aragnimo ah beeyaal.
Baro wax walba oo ku saabsan faa'iidooyinka jelly boqornimada caafimaadkaaga, iyo sidoo kale sida si haboon u qaadato alaabtan iyo sii wadida guryaha bogsashada.
Tilmaamaha isticmaalka "Apimaksa"
Balsam "Apimax" waa daawo guud. Fungicides iyo acaricides ee ka kooban waxay leedahay saameyno antimicrobial. Qeybahaasi waxay dilaan noolaha ugu fudud ee keena cudurrada. Codso daawada loogu talagalay daaweynta:
acarapidosis, jirroosis, nosema;
cudurrada faafa (xummad, qandhada paratyphoid, colibacillosis, iwm.).
"Apimax" loogu talagalay shinni ayaa loo adeegsan karaa siyaabo badan, waxay ku xiran tahay hadafyada. Si kor loogu qaado difaaca, daroogada ayaa loo isticmaalaa xilliga dayrta. Muddada daaweynta iyo ka-hortagga waa in la bilaabo ugu dambeyn bil gudaheed ka hor inta aan la dhisin bulshada shinni ah.
Waa muhiim! Moobeylka waxaa lagu fuliyaa heerkulka hawada laga bilaabo +15° Slaakiin ma yareyn.
Wixii daaweynta cudurrada, korniinka iyo firfircoon ee mashiinka moobeyl lagu sameeyo guga. Hawlaha ugu dhakhsaha badan iyo kuwa horeba waxay bilaabmayaan, natiijada waxtarka badani waxay noqon doontaa.
Daaweynta iyo Maamulka
Daawada "Apimaks" waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo fungal, bakteeriyada, cudurada la isqaadsiiyo, fara-gelinta khafiifinta, iyo sidoo kale inay taageeraan horumarinta qoyska shinni. Hawlahaas waxaa lagu qabtaa guga. Ka hortagga Nosema, kicinta horumarinta difaaca ayaa la sameeyaa xilliga dayrta.
Waa muhiim! Daawada waa mid caalami ah: waxay dawaysaa cuduro badan, xoojiyaa caafimaadka bees. Kuwa, marka hore, si tartiib ah u baabbi'iya sharoobada, iyo dhadhanka fiiqan ee malmal ma aha kuwa aan fiicnayn iyaga.
Mucjisada daawada ah ayaa la siiyaa xayawaanka rabaayada thanks to dufanka galay malab. Sharootada la qalay ayaa lagu qiyaasaa 35 millimitir, halka jirku si adag u daboolay shinni. Sida looga hortago, hal quudin ayaa ku filan. Si loo daaweeyo nomatosis, sharoobada waxaa la siiyaa bees. 2 jeer leh mudo ah 3 maalmood.
Sida dhammaan balms teraabiyada, waxaa jira taxadar ah isticmaalka "Apimaks". Waa inaad hubisaa in miro yaraantu aanay u galin indhaha ama afka. Haddii ay taasi dhacdo, biyo raaci aagga. Waxa kale oo muhiim ah in aan carruurta u oggolaan in loo diyaariyo oo lagu keydiyo daawada meel qallalan leh heerkul ah 20-30 ° S, ka fogaanshaha iftiinka.
Iyada oo dhammaan hababka wax soo saarka, hal dhalo ayaa loo isticmaalaa 100 shaabbi oo leh shinni. Daaweyn kasta waxaa lagu sameeyaa 15 ° C, si adag u raac tilmaamaha iyo talooyinka.
Si loola dagaallamo shilinta ee shinnida, daroogada Bipin ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Faa'iidada of balm "Apimaks" ee uu Halabuurka caadiga ah. Diyaarinta waxaa jira wax soo saar cirbadaha leh ur adag. Waxa kale oo ku jira qaybaha sida toonta, gooryaanka, basbaaska, milixda, miro-cawaaqibka iyo xijaabka.
Isticmaalka dawadan, dhirbaaxadu ma ka welweli karto tayada malab. Daroogadu ma saameyneyso dhadhanka ama xajmiga malabku
Ma taqaanaa? Milkiilaha apiary waxaa si dhif ah loo qaniinaa: shinnida shaqaaluhu waxay aqoonsaneysaa isaga oo ka muuqda sifooyinka wajiga, iyagoo taxaddar u leh dibnaha, dhegaha iyo gacmaha.
Kala saarista Apimaks waa antibiyootiko awood leh. Intaa waxaa dheer, waxay ku sumoobeen macdan iyo fitamiino kordhiya difaac, soo celin xoog, saamayn ku yeelashada koritaanka qoyska shinni.